IBhayibhile Ithi Ngubani Umchasi-Kristu?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMaya IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNdebele IsiNdonga IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTok Pisin IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUmbundu IsiVenda IsiVietnam IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
Imuvi yakutshanje eyoyikisayo iye yathiywa igama elithi Antichrist (Umchasi-Kristu).
Iqela lomculo elaziwayo liye labiza icwecwe lalo elitsha ngokuthi yiAntichrist Superstar.
Intanda-bulumko eyayiphila kwiminyaka yee-1800, uFriedrich Nietzsche, yabhala incwadi ethi The Antichrist.
Ookumkani bamandulo babedla ngokuthi iintshaba zabo ngabachasi-Kristu.
UMartin Luther waseJamani, owayekhokela ngexesha leeNguqu wathi oopopu bamaRoma Katolika ngabachasi-Kristu.
EKUBENI igama elithi ‘umchasi-Kristu’ liye lasetyenziswa kubhekiswa kookumkani nakwiimuvi, ulindelekile umbuzo othi: Ngubani umchasi-Kristu? Kutheni simele simazi? IBhayibhile inokusinceda sazi ukuba ngubani na umchasi-Kristu, kuba livela kahlanu eli gama kuyo.
Ngumpostile uYohane kuphela umbhali weBhayibhile owasebenzisa igama elithi ‘umchasi-Kristu.’ Wamchaza njani? Khawuve la mazwi akwincwadi yakhe yokuqala: “Bantwana abaselula, sekulilixa lokugqibela, yaye, kanye njengoko nevayo ukuba umchasi-Kristu uyeza, nangoku sebevele babaninzi abachasi-Kristu; nto leyo esenza sazi ukuba sekulilixa lokugqibela. Bakreqa kuthi, kuba babengengabo abethu kakade . . . Ngubani na olixoki ukuba asinguye lowo ukhanyelayo ukuba uYesu unguKristu? Umntu onjalo ungumchasi-Kristu, okhanyela uBawo noNyana.”—1 Yohane 2:18, 19, 22.
KuYohane, abachasi-Kristu ngabantu abasasaza ubuxoki ngabom ngoYesu Kristu nangeemfundiso zakhe
Sifunda ntoni kuloo mazwi? UYohane wathetha ‘ngabachasi-Kristu,’ nto leyo ebonisa ukuba umchasi-Kristu ayingomntu omnye, kodwa liqela labantu. Abachasi-Kristu ngabantu okanye amaqela asasaza ubuxoki bokuba uYesu akanguye uKristu okanye uMesiya, nokuba uThixo noNyana wakhe uYesu Kristu, ngumntu omnye. Abachasi-Kristu bathi banguKristu ngoxa abanye babo besithi bamela uKristu. Kodwa kuba “bakreqa kuthi,” abafundisi mfundiso zichanileyo zeBhayibhile. Aba bantu babekho xa uYohane wayebhala ileta yakhe ‘ngelixa lokugqibela,’ ekumele ukuba lalibhekisela kwixesha lokuphela kwabapostile.
Yintoni enye awayithethayo uYohane ngomchasi-Kristu? Ethetha ngabaprofeti bobuxoki, walumkisa wathi: “Onke amazwi aphefumlelweyo amvumayo uYesu Kristu njengoye weza esenyameni aphuma kuThixo, kodwa onke amazwi aphefumlelweyo angamvumiyo uYesu akaphumi kuThixo. Kunoko, lawo ngamazwi aphefumlelweyo omchasi-Kristu enevayo ukuba uyeza, yaye ngoku sele ekho ehlabathini.” (1 Yohane 4:2, 3) Waza kwileta yakhe yesibini, uYohane waphinda la mazwi: “Kungene abakhohlisi abaninzi ehlabathini, abangavumiyo ukuba uYesu Kristu weza esenyameni. Abantu abanjalo ngabakhohlisi nabachasi-Kristu.” (2 Yohane 7) Kuyacaca ukuba kuYohane, abachasi-Kristu ngabantu abasasaza ubuxoki ngabom ngoYesu Kristu nangeemfundiso zakhe.
“ABAPROFETI BOBUXOKI” ‘NABACHASI-MTHETHO’
UYesu walumkisa ukuba abaprofeti bobuxoki babeza kuza ‘beziingcuka eziqwengayo ezizifihle ngezambatho zeegusha’
Kwangaphambi kokuba uYohane abhale ngaba bakhohlisi, uYesu Kristu walumkisa abalandeli bakhe wathi: “Baphapheleni abaprofeti bobuxoki abeza kuni ngezambatho zeegusha, kodwa ngaphakathi beziingcuka eziqwengayo.” (Mateyu 7:15) Nompostile uPawulos walumkisa amaKristu aseTesalonika wathi: “Makungabikho namnye unilukuhlayo nangaluphi na uhlobo, ngenxa yokuba [imini kaYehova] ayiyi kuza ngaphandle kokuba kufike uwexuko kuqala, atyhileke umchasi-mthetho, unyana wentshabalalo.”—2 Tesalonika 2:3.
Zazifanelekile ezi zilumkiso, kuba kwakwinkulungwane yokuqala babesele bekho abaprofeti bobuxoki nabawexuki ababezimisele ukuchitha ibandla lamaKristu. Xa uYohane wayesithi ‘umchasi-Kristu’ wayebhekisela kuwo onke amabhedengu awayesasaza ubuxoki ngoYesu Kristu nangeemfundiso zakhe. Indlela uYehova abajonga ngayo ibonakala kakuhle kumazwi kaPawulos athi, ‘bangoonyana bentshabalalo.’
BALUMKELE ABACHASI-KRISTU BANGOKU
Basekhona ke namhlanje? Abantu namaqela angabachasi-Kristu basamchase kunangoku uKristu neemfundiso zakhe. Basasaza ubuxoki ngabom kuba befuna angaziwa ukuba ngubani kanye kanye uBawo, uYehova uThixo, noNyana wakhe, uYesu Kristu. Kufuneka ke sizilumkele iimfundiso ezingachananga ezifana nale. Makhe sithethe ngale mizekelo mibini.
Kangangamakhulu eminyaka, iicawa ziye zafundisa ukuba uThixo nguThixo oZiqu-zithathu, zisithi uYise noNyana ngumntu omnye. Ngale mfundiso, abachasi-Kristu baye benza abantu abamazi kwaphela uYehova uThixo noNyana wakhe uYesu Kristu. Ibe ibenze abakwazi ukuxelisa uYesu Kristu, abakwazi nokusondela kuThixo njengokuba iBhayibhile isikhuthaza ukuba senze njalo.—1 Korinte 11:1; Yakobi 4:8.
Iicawa ziye zaphinda zabalahlekisa abantu ngokubakhuthaza ukuba basebenzise iinguqulelo zeBhayibhile ezilikhuphileyo igama likaThixo lobuqu, uYehova. Aziyikhathalelanga into yokuba igama likaYehova livela izihlandlo ezimalunga ne-7 000 kwizibhalo zokuqala zeBhayibhile. Ube yintoni ke umphumo? Abantu abamazi kwaphela ukuba ngubani uThixo.
Kwelinye icala, ukwazi igama likaThixo, uYehova, kuye kwanceda abo bafuna ukumkholisa basondele kuye. Kwenzeka loo nto kuRichard, owancokola namaNgqina kaYehova amabini. Uthi: “Bandibonisa eBhayibhileni ukuba igama loThixo oyinyaniso nguYehova. Ndabamb’ ongezantsi ndakuva ukuba uThixo unegama lobuqu, kaloku yayintsha kum leyo.” Ukususela ngaloo mini, uRichard watshintsha indlela aphila ngayo ukuze athobele imigaqo yeBhayibhile aze akholise uYehova. Ugqibezela ngelithi, “Ukufunda ukuba uThixo unegama kwandinceda ndafuna ukuba ngumhlobo wakhe.”
Kangangamakhulu eminyaka, izigidi zabantu bezingayazi inyani ngoThixo ngenxa yabachasi-Kristu. Kodwa ke, xa sifunda iLizwi likaThixo iBhayibhile, siyakwazi ukubona ukuba ngoobani abachasi-Kristu ukuze singabanjiswa ziimfundiso zabo ezibubuxoki.—Yohane 17:17.
Impendulo yeBhayibhile ingakumangalisa. Funda ngesizathu sokuba ibaluleke nokuba ilichaphazela njani ikamva.